IrishWhiskey.Com kwenza olufushane for 2018 Blog Imiklomelo Ireland. | Irish Whiskey .com
IrishWhiskey.Com kwenza olufushane e Izigaba ezimbili 2018 Blog Imiklomelo Ireland .
Emasontweni ambalwa edlule sajabula ukumemezela ukuthi IrishWhiskey.com zase eside ohlwini ngenxa 2018 Ibhulogi Imiklomelo Ireland ezigabeni ezimbili.
Ukuqokwa wokuqala kwaba i IrishWhiskey.Com for Best Blog 2018 in the Food and Drink Blog category.
Ukuqokwa yesibili kwakunguDodayi best phezu zonke Siqu Blog sebhulogi sihloko yami Sliabh Liag Distillery e Donegal.
Ngajabula ukuthola izindaba kulobu busuku manje kokubili ukuqokwa kwakhe umklomelo wenzé ngempumelelo ku- 2018 Blog Imiklomelo Ireland olufingqiwe.
Eminyakeni emihlanu nje edlule ngabona isihloko inthanethi mayelana isizinda web Whisky.com nokudayisa $3.1 Million. Njengoba i-Irish Whiskey Aficionado, Angipholisanga maseko, ngaqala ukuzibuza ukuthi ubani ophethe isizinda web IrishWhiskey.Com? Mina abe esezama ukuthola umnikazi lesizinda (umnumzana!) owayengamele abanentshisekelo yokuthengisa domain.
Ngavele uxwayiswe yonke ke ehola izinkampani Whisky Irish ukuthi lesi sizinda esibalulekile; empeleni sha digital Irish Whiskey umkhakha owawenza sikwazi umthengi wokuqala futhi kufanele, ngaphandle ukulibala, ngemali futhi ivikelwe ngoba Ireland kanye Irish Whiskey wemboni.
Naphezu ngonyaka ka kuqala ekuhlanganiseni, I failed to capture the interest of either the Irish Whiskey sector under their then new umbrella organisation, noma yimiphi emikhulu Irish nogologo Distilleries ngubani ubezobanaso lwetimali ukuba ngokushesha ukuthenga futhi uvikelekile ku domain ukuze Ireland.
Ekugcineni aphume ukuxuba yokukhungatheka uthando kagavini Irish, Ngafaka imali yami lapho umlomo wami kwaba kanye okuxoxiswene ukudayiswa lesi sizinda ukhiye web kimina ngoba isizumbulu kakhulu imali. I happily paid for IrishWhiskey.com out of my own personal resources.
Nakuba kwakubiza abalulekile, Angikaze i osheshayo ngizisole inkambo yami.
I then created Irish Whiskey Inqola, I Dublin Whisky Inqola, Irish Whiskey Indlela futhi Irish Whiskey.Pub whiskey emizileni ukukhuthaza Irish Whiskey ezokuvakasha emhlabeni wonke.
Siye saba impumelelo enkulu futhi Zithokozise kwethulwa yethu eminyakeni emibili edlule International Irish Whiskey Day phezu Mashi 3rd (3/3) unyaka ngamunye.
Isivakashi traffic IrishWhiskey.com liye landa kancane kancane futhi exponentially unyaka ngamunye okwaholela ekubeni ukuhambisa indawo kwiseva Enterprise ezingeni ekuqaleni kwalo nyaka. Naphezu amahora amade futhi izindleko siqu, bekulokhu omunye the best, albeit riskiest decisions that I have ever made in made in my life.
Ngiyabonga kubo bonke abafundi bami abaningi nogologo umkhakha abangane ngokwabelana ukwesekwa yakho Amazing futhi ubungane kule adventure emangalisayo.
Izinsuku like namuhla okuyinto bona okuhle ukuthi IrishWhiskey.com sizinda manje ukwenza besekela Irish Whiskey wemboni ukwenza konke kuwufanele ngenkathi.